Muchinda wemhute, basa rekutanga raCarlos Ruiz Zafón | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vechidiki Mabhuku, Novela, Zvinotyisa
Muchinda wemhute - mupepeti wePlaneta.
Muchinda weMist chidiki chevakuru chakavanzika uye kufungira bhuku, yakanyorwa neSpanish Carlos Ruiz Zafón, uye yakaburitswa muna 1993. Iyi ndiyo nhoroondo yekutanga yakaburitswa nemunyori. Anotsanangura, muchidimbu mutsamba pakutanga kwebhuku, kuti, mukushaikwa kwemupepeti, aive nepfungwa yekupinda basa mumakwikwi emabhuku, ayo akahwina, uye izvi zvakaita kuti azvipire zvachose kunyora.
Iri bhuku ndiro rekutanga re Mist Trilogy, ndokuteverwa Imba yepakati pehusiku y Mwenje yaGunyana. Basa racho rine mhepo yegungwa ine chakavanzika chine njodzi. Misoro mikuru yakafukidzwa ndeiyi: kukosha kwekufamba kwenguva, pamwe nekutora mukana sekondi yega yega; kunzwisiswa kwezvikamu zvakasiyana-siyana zvinopfuura kuburikidza nemunhu, kupfuura kubva paudiki kusvika padanho rakakura, hushamwari uye mashiripiti.
2 Kutanga kwezvakavanzika
2.1 Guta risingazivikanwe
2.2 Imba ine rima yakapfuura
2.3 Sango rine chakavanzika chine rima
3.1 Max muvezi
3.2 Alicia muvezi
3.4 Mr kaini
4 Nezve rangano
Nyaya inotanga riinhi Max Carver anofanira kufamba nevabereki vake nehanzvadzi imba iri padyo nemahombekombe mutaundi diki kumahombekombe kweAtlantic. Kutamisa uku kwakaitika nekuda kwehondo yepakati paJune 1943, mukomana paakanga achingova nemakore gumi nematatu. Max, anga achigara munzvimbo imwechete kwemakore gumi, anoona pfungwa iyi ichityisa, asi munhu wese mumhuri aive nemaonero ake.
Zvinhu zvinotanga kutora kuchinja kwakanaka apo Maximiliano Carver, anogadzira wachi, muumbi uye baba vaMax, inokupa wachi yakanaka muhomwe yakavezwa musirivheri yezuva rako rekuzvarwa husiku chete usati watama.
Nekudaro, iro jaya rine fungidziro yakasviba. Iko kunzwa kwekuti pane chakashata kunodzoka zvishoma kana Max awana gungwa kekutanga munzira yake kuenda kuguta. Panguva iyoyo chaiyo anovimbisa kuti aisazombogara munzvimbo iri kure negungwa. Iri ibhuku revechidiki rine marongero anoshamisa anozobata chero muverengi.
Pakusvika kudhorobha, Irina, munin'ina waMax, akabatwa nekatsi yakakura yetabby, iyo inoba moyo wayo. Musikana uyu anokumbira vabereki vake kuti vamubvumire kuti aichengete, izvo zvisingadiwe nemukoma wake, Alicia. Panguva iyoyo, uye vachiona chiitiko ichocho, Max anoona kuti wachi yeguta inoshanda mushure, izvo zvinoda kuziva kwaari.
Imba ine rima yakapfuura
Mushure merwendo rurefu, mhuri inogara pamberi pemba yavo nyowani yenhurikidzwa mbiri kuchamhembe kwekumusoro kwegungwa. Sezvineiwo yanga isina chinhu kwevamwe makore, uye kuita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza, Maximilian Carver anokuudza nyaya yekuvakwa kwayo. Icho chikonzero nei panguva iyoyo Vakatenderwa kutiza kubva kuguta uye kubva kuhondo, zvaive nekuti dambudziko guru rakaitika imomo makore apfuura.
Imba yacho yakavakirwa muna 1928 yechiremba weLondon Richard Fleicshmann nemukadzi wake Eva Grey, seimba yezhizha.
VaFleicshmanns vakanga vasina vana, uye vaive vasina hukama zvakanyanya. Nekudaro, kana uchienda kuimba yegungwa, mukadzi uyu akaita nhumbu achizobereka mukomana wavakatumidza kuti Jacob, uye wavaida nemoyo wese.
Mufananidzo wemunyori Carlos Ruiz Zafón.
Pakukwirira kwaro kwemufaro, nhamo yakauya, ye muna 1936, Jacob akawanikwa akafa. Akanyura mugungwa, kana akadaro Maximilian Carver akavaudza. Senge kuti nyaya yerufu irworwo yanga iri yei, mhuri yekwaCarver yakapinda mumusha wavo mutsva ndokutanga kuburitsa.
Sango rine chakavanzika chine rima
Mukugadzirisa kwekugara mumusha mutsva, Max anoziva kuti, kunze, padhuze nesango, ibindu risinganzwisisike remifananidzo inoita kunge inofamba.
13 makore, Max akangwara uye anokwanisa kwazvo kuona manzwiro evamwe uye ita kuti vanhu vanzwe zvakanaka. Zvisinei nezera rake, Max mukomana anonzwisisa ane kugona kukuru kugadzirisa zvakavanzika.
Ndiye mwanasikana wedangwe wemhuri. Kunyangwe Alicia akarasika mumafungiro ake pakutanga, apo kuenda kunowedzera kuoma, anogona kuve musikana akashinga ane moyo muhombe.
Shamwari yaMax uye kuda kwaAlice. Roland, ane makore gumi nematanhatu kana gumi nemanomwe, murume wechidiki anokwezva anotora Max kuti aone guta. Gare gare, iye, Max naAlicia vane mikuru mikuru yekukanyaira bay iri yakatenderedza ngarava inotakura zvinhu, iyo Orpheus, yakanyura makore apfuura mudutu.
Munhu akaipa. Chiremba Kaini, kana Muchinda weMist, inyaya ine rima uye ine hutsinye inoshandura chimiro pakumufarira. Anopfeka masutu akanaka, maziso ake anochinja ruvara uye haambobwaira. Iye anoonekwa pakurangana semupikiswi mukuru wevatsigiri, achiita sen'anga inopa zvido mukutsinhana nemutengo wakakwira kwazvo.
Sekuru vokurera vaRoland uye shamwari yevaFleicshmanns. Uyu murume ndiye muvaki uye muchengeti wemba yeguta yeguta, uye ndiye iye akabata kiyi yekutsvaga enigma yezviitiko zvinoteedzana murangano.
Iri bhuku rine zvitsauko gumi nesere, kusanganisa chinyorwa chemunyori uye epilogue. Mumutambo uyu, Ruiz Zafón anoburitsa zvakavanzika zveiyo nyaya nenzira inonakidza, yakasviba, uye dzimwe nguva yekunyongana.
Kutaura kunoitwa sei hupenyu hwevanhu husina kusimba, uye iyo nguva, sekuzivikanwa kwayo: "haipo, uye ndosaka isingafanirwe kurasikirwa." Vatambi vanovimbika, pamwe neanodakadza, uye vanokura nechirongwa.
Carlos Ruiz Zafón akadzidza sainzi yeruzivo, uye aigara achizvipira kune nyika yekushambadzira, kuve pane imwe nguva yekugadzira director wekambani yakakosha yeSpanish. Nekudaro, rudo rwake rwekuverenga rwakamunyudza muhunyanzvi hwekunyora. Uye tarisa, anga asina kukanganisa mukusarudza iyi nzira, parizvino mabhuku emunyori ari pakati pe anotengesa-ngano ngano kubva kuSpain.
Runyorwa rwake rwekutanga, rwakarondedzerwa se "zvinyorwa zvevechidiki" -Muchinda weFog-, akapihwa mubairo weEdebé. Iri basa rine peculiarity: chero munhu ane kuravira kwezvakavanzika anogona kunakidzwa nazvo, zvisinei nekuti vane makore mangani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Muchinda weMist, kutanga basa naCarlos Ruiz Zafón